I-Haus am Hainer See - I-Airbnb
I-Haus am Hainer See
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJustus
Ikhaya lethu leholide elitofotofo likuHainer See kumzantsi weLeipzig. Ithala elikhulu elangeni elinendawo yokubuka ichibi, indawo yokuhlala etofotofo enendawo yokubasa umlilo namagumbi okulala ayi-3 anika abantu abayi-8 indawo eyaneleyo yokuthetha, ukutya, ukudlala, ukuhleka, ukuxakeka, ukuphupha, ukuphila. Yonwabela ixesha lokuphumla nge-. Ndijonge phambili ukukubona kungekudala!
Ikhaya leholide likuHainer See kumzantsi weLeipzig. Inamagumbi okulala ayi-3, amagumbi okuhlambela ayi-2 kunye negumbi lokuhlala elivulekileyo elinesofa eyongezelelekileyo kunye nendawo yokupheka evulekileyo kunye nendawo yokutyela, ukuya kutsho kubantu abasibhozo banokuhlala apha iholide ekhethekileyo. Into ekhethekileyo eyenza yahluke yindawo eyi-45 enechibi elikhethekileyo. Yitya, igrili, dlala, funda, romp – yonke into iyenzeka kwaye yonke into ngexesha elinye. Ngenxa yendawo entle esecaleni kweenduli zendlu, usoloko ulibona lonke ichibi ibe unokuphupha ngamaza asendle okanye ukuzola okusuka kwigumbi lokulala nelokuhlala nakumagumbi okuhlambela. Ngenxa yokuba kufutshane neLeipzig (imizuzu eyi-20), iChemnitz (imizuzu eyi-45), iDresden (imizuzu eyi-75) okanye iSaale-Unstrut Valley (imizuzu eyi-45), le ndlu ikwayindawo entle yokuqalisa uhambo losuku lokubuka ummandla.
Ikhaya leholide likunxweme olusemntla weLake Hainer, isakhiwo sangaphambili sosuku, embindini wendawo entsha eyakhiwe ngeholide. Indawo eyingqongileyo iluhlaza, nangona ingakhuli kangangeminyaka eyi-40. Izindlu zisakhiwa kule ndawo, kodwa indawo ekufutshane sele igqityiwe, ngoko akukho ngxolo yokwakha ephazamisayo kwiholide oyidingayo. Kwiimitha eziyi-50 ungathatha isuphu emanzini okanye kwi-100 m kunye nabantwana ukuze baqubhe elunxwemeni lwesanti. Sikwathanda ngokukhethekileyo ukuzola ngokuhlwa xa ujonga ichibi elizolileyo kwifenitshala yendawo yokuphumla elinomlilo opholileyo kwindawo yokubasa.
Umbuki zindwendwe ngu- Justus
Sithanda ukushiya iindwendwe zethu ziphumle. Ukuze siyihlole le ndawo, siye senza amacebiso okuhamba nawokutya abo bonke ubudala, ngaphakathi nangaphandle. Ezi zinokufunyanwa kwifolda ekwisayithi. Kakade ke, siyakuvuyela ukunceda nanini na. Eyona ndlela yokuqhakamshelana nathi yi-imeyile, kodwa ke siyakuvuyela ukufikelela kuyo ngefowuni.
Sithanda ukushiya iindwendwe zethu ziphumle. Ukuze siyihlole le ndawo, siye senza amacebiso okuhamba nawokutya abo bonke ubudala, ngaphakathi nangaphandle. Ezi zinokufunyanwa kwifo…